Erayo jacayl oo aad u murugo badan - iftineducation.com
Labada isla qaatana , qalibigooda Kama ba’o
erayadan jacayl oo ah kuwo lagu saleeyay dhacdooyin dhab ah kuna haboon in aan adeegso , waxaana qalinka u qaatay qoraaga weyn cilmi siciid ,
Habeen iyo maalin waxaan is weydiiya inaan ku heli doono iyo in kale, qalbigaygu waxa uu aad ula khushuuc san yahay jacayla xad dhaafka ah ee aad igu beertay, indhahaygu waxa ay aad ula yaaban yihii oo markasta u sawiran muqaalkaaga, dhagahayguna waxa ay codkasta oo ay maqlaan u maleeyaan kaagii, alah jacaylku macaana hadana kharaar .
Jacaylku idho maleh dhegona ha sheegin mcnt anigu wax dambi ah malihi waayo qalbigaygu aniga oo aan war u hayn yuu iga kaa raacay , runtii noloshaydu alle ka sokow adiga ayay kugu xiran tahay fadlan haygu daawan caashaqa .
Naftayda waxaad ku abuurtay dareen jacayl oo aanay weligeed arrag marwalbana xagaga ayaan ahay kuuna balan qaadaaya runtiina waan ku jecelahay .
Marwalaba ka fikirkaaga ayaan la ildaranahay iyo sidaan kula kulmaayo waxaan jecelahay in aan kula kulmo malin walba iyo xili walba macaan waayo waxaad tahay qof noloshayda ku dhex beeray sina kaagama maarmo mcn .
Ku jecliyaa dadkana kugu jecliyaa runtiina waxaan ka warwaraaya sidaan u noolaan doono adiga la’aanta marwalbana waxan ahaan doona mid adiga uun kaa fikirta .
Mcnto jacaylka aan kuu qaaday ma ahan wax la dhalay san karo oo dheel noqon karan ,murudaga iyo wal bahaarka iyahaysta waxa iiga daran markasta oo aan seexo is idhaahdo oo aan indha isku qabto yaa sawirkaagii lay horkeena , markasaan baraaruga aadna u xanuunsanda indhahaygana ay ilmo kusoo istaagta, waxan ka baqayaa in aan nolosha ciriirigaa ku dhamayso maxaa yeelay qof aan adiga ahayn iima muuqdo.
Mcn weligay waan ku jeclaa, jacaylkaga dartiisna waxaan u huray nafatayda sidii aan kuu raalli gelin lahaa marwal iyo daqiiqad walba waxaan ku rajo weynahay inan noloshayda inta ka hadhay aan kula wadaago , naftayduna adigay raalli kaa tahay kumana qasbi karaayo nin aanay raalli ku ahayn inay nolosha la wadaagt, Runtiina waan ku jecelahay waxa ilmada indhayga ka shubayaana maaha wax sahlan ee waa jacaylkaa aad igu beertay.
illaa maalinkaan ku jeclaaday illaa maanta habeena ma seexan hurdo la’aantaa, marwalbana waxaad tahay mid naftayda ku dheer oo dareenkaygu la jiro, haddii aan is idhaahdo howl qabona adigaan kaa dhex arkaa iyo wanaagi aad ii sammaysay, daraadana waxaan ahaa mid nafteeda u hurtay sidii ay jacaylkeeda u haqab tiri lahayd. Waxay naftaydu adiga dartaa igu qasbtaa in aan sameeyo wax walba oo suuro gal ah, mcn waan ku jeclahay illaa weligayna waan ku jeclaan doonaa .
jacayla aan kuu qabo waxa uu ku baahay jirkayga oo dhan, waxa uu qilgilay qalbigayga , waxa uu ku milmay dhiigaygi, waxa uu dhaqaajiyay dhuuxaygi. Waan ku baryayaa mcnt ha ka bixin balantii iyo wacadkii inoo dhexeeyay .